म श्रीमानलाई श्रीमान मात्र भन्दिन — Digital News
सरु बस्नेत प्रकाशित : २०७७/६/२ गते
हिन्दु धर्म, परम्परा अनुसार बैबाहिक जिबनमा जोडिएका जोडिलाई श्रीमान श्रीमतीका रूपमा हेर्ने गरिन्छ । जिबनका अनेकौं खु्ट्किलाहरु पार गर्ने क्रममा कतिपय श्रीमान श्रीमतिको सम्बन्ध बिचमै टुटेको हुन्छ । कतिपय श्रीमान श्रीमतीले एकले अर्कोलाई हत्या गरेका समाचारहरु टेलिभिजनका पर्दामा नदेखिएका हैनन् । अखबारका पानाहरुमा नछापिएका पनि हैनन् । भनिन्छ श्रीमान श्रीमतीको माया भाग्यमै लेखिएको हुदैन । बैबाहका लागि जीवन साथि नत भगवानले जुराएरै पठाए हुन्छन् ।
म पनि एक बिबाहित नारी हुँ । लाग्छ जीबनमा हरेक बिबाहित नारीको खुशी आफ्नो श्रीमानसँग जोडिएको हुन्छ । जीवन जिउनका लागि श्रीमान श्रीमती (लोग्ने, स्वास्नी) एकअर्काको परिपुरक हुन । जिबनका हरेक खुशीहरु लोग्ने र स्वास्नी बिचको सम्बन्धमा जोडिएको हुन्छ ।
मेरो बिबाह २०६४साल बैसाख ३१ गते भएको हो । हामी बैबाहिक जिबनमा बाँधिएको झन्डै १२, १३ बर्ष पुग्न थालेको छ । हरेक दिन, हरेक बिहानी म श्रीमानको नामले हरेक दिनको हेरेक कामको सुरूवात गर्ने गर्छु । बैबाहिक जिबनका बाह्रौं बशन्त पार गर्ने क्रममा कहिलेकाही मनमुटाव नभएको पनि हैनन् तर, ति मनमुटावलाई मैले स्वभाबिक रूपमा लिने गरेकि छु ।
मेरो बचपन माहिती घरमै बित्यो । १४, १५ बर्षको उमेर खादै खेल्दै, साथी भाइसँग हास्दै र रमाउदैमा बितेको पत्तै भएन । ९, १० कक्षामा पढ्ने बेलाको उमेरमा भोलि जीवन र भविश्यका बारेमा कुनै चिन्ता हुदो रैनछ । बाबा–आमामो साथमा केही कुराको कमि पनि भएन भोलिको वास्ता पनि भएन । जीवन के हो ? बुझ्न सकिएन । जब म दुलही भएर कसैको श्रीमती भए, त्यो दिनदेखि मलाई धेरै कुराले पिरोल्ना थाल्यो । अब त म कसैको श्रीमती पो भए, अब ती पल्लो घरकी काकी जस्तै मेरो घर परिवारले मलाई के कति कुराले पेल्छन होला ? मैले घरबाट बाहिर निस्कन पनि पाउदिन होला ? घरपरिवार आफन्तको मन राख्न सक्दिनकि ? मलाई घरका सबैले हेला गर्ने हुनकि ? माईतीमा जस्तो खाना लाउन पाउदिना होला ? साथी सँगिसँग अब त फेरि भेट हुदैनन् होला ? कतै जानि नजानि गल्ती गरे भने मेरो श्रीमानले मलाई पिट्नु हुन्छ होला ? बुहारीले गर्नु पर्ने घरको कामका बिषयमा मलाई केही पनि थाहा छैना, यदि मैले काम गर्न सकिन भने घरबाट निकाल्दिन्छन होला ? यस्तै–यस्तै सोचि रहन्थे । सायद यस्तै यस्तै कुराहरु सोच्ने उमेर नै त्यस्तै थियोे, जस्तो लाग्छ । अनेक डरत्रास लागि रहन्थ्यो । वरपर देखेको थिए कतिपय श्रीमानले गरेको ढिपिलाई देख्ने गरेकि थिए । लोग्नेहरूको हरेक कुरा मान्दिनु पर्ने, आफुले आफैलाई सर्बश्रेष्ठ ठान्नेहरू देखेकी थिए ।
श्रीमती घरका नोकर हुन, खान पकाउन, भाँडा माझ्न र श्रीमानको आदेशनुसार श्रीमतिलाई घर भित्रै थन्क्याएर राखिनु पर्छ भन्ने मानसिकता भएका पुरूषबादी श्रीमानहरू पनि आँखै अगाडी देखेको थिए । दुख लागेर आउछ बिचरा ती श्रीमती जसको हरेक क्षमता हुदाहुँदै पनि त्यस्ता श्रीमानका सिकार भएका छन । महिला रास्ट्रपति भएको देश नेपालमै हरेक महिला पुरूषका सिकार हुनुपर्ने अबस्था हुनु आफैमा दुखद हो । यिनै कुराले भतभति पोल्ने गर्छ ।
मैले बिबाह गरे पश्चात घरमा साईली आमाजु हुनुहुन्थ्यो साथमा भान्जी जेनिसा, एनिसा, मनिसा, अनिसा सानि–सानि थिईन । मलाई लाग्यो मेरा साथी यता पनि रैछन । मलाई दिन बिताउन गाह्रो हुदैन भन्ने लाग्यो । (सासु–ससुरा) आमाबाबाको पहिले नै निधन भैसकेको थियोे । मेरो श्रीमान (रमेशकुमार बस्नेत)को साहारा दाई–भाउजु र दिदीहरू नै हुनुहुदो रैछ ।
जब रमेशको जिबनमा मेरो प्रबेश भयो हामी एकअर्काको भयौं । रमेशलाई लाग्न थालेछ कि म उसको श्रीमती हैन । जब मैले आफ्नै हातले खाना पकाएर दिन थाले, सँगै बसेर खाना थालियौं उहाँलाई आमा जस्तो लाग्न थालेछ । हरेक कामसँगै हुन थाल्यो । शुख, दुःख साट्न थालियौ उहाँलाई साथि जस्तो लाग्न थालेछ । हरेक कुरामा कियर गरे उहाँलाई म प्रेमिका जस्तो लाग्न थालेछ ।
चाँडबाडमा रमेशलाई कहिले एक्लै छोडिन । उहाँलाई म अभिभावक लाग्न थालेछ । जिबनका हरेक खुशी पूरा गर्न मैले हर प्रयत्न गरे । २, ३ बर्षपछि हाम्रो छोरा जन्मियो । बल्ल रमेशलाई म श्रीमती लाग्ना थाल्यो । हो मलाई नि जीबनका हरेक खुशी पूरा गर्ने, मलाई केहि कुराको कमि नगर्ने, हरेक काममा साथ सहयोग र हौशला दिने, महिलाले पनि पुरूष जस्तै काम गर्न सक्छन्, तिमी पनि पछि पर्नु हुदैन तिमी जति सक्छौ आफ्नो र समाजको लागि गर तिमीलाई साथ दिने म छु । नडराउ नबिराउ तिमीले गरेका हरेक खुशी मेरा हुन, हाम्रा हन, सास रहुन्जेल म छु तिम्रो भनि रहने मेरो प्यारो मान्छे उ श्रीमान मात्रै हैना उ मेरो अभिभावक हो, साथि हो, प्रेमी हो, साहास हो, धट्कन हो, जीवन हो, मृत्यु हो र त उसलाई म श्रीमान मात्रै भन्दिन ।
(लेखकः–नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा जाजरकोटकी सदस्य हुन् ।)